Valentineသက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » Valentineသက်	14
Posted by moonpoem on Nov 29, 2014 in Creative Writing, Think Different | 14 comments
Valentine အသက်အရွယ် ဖြစ်သည်။ချစ်ခင်နှစ်လို ဖွယ်ရာကောင်း၏။
Christmas အသက်အရွယ်ဖြစ်သည်။အများတကာ မျှော်လင့်နေကြသေးသော အရွယ် ဖြစ်၏။
တော်လှန်ရေးအသက်အရွယ်ဖြစ်သည်။အနီးအနားတွင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အိမ်ထောင် မပြုသေးဘူးလား ဘာလားအစရှိသော စကားများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရစ ပြုလာပြီဖြစ်သော အရွယ် ဖြစ်၏။
နုပျိုခြင်းတို့၏ အဆုံးစွန်သော year ending
အသက်အရွယ် ဖြစ်သည်။သို့သော် New year ကဲ့သို့လည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြန်သည်။
မိုးမိုးသီချင်းကဲ့သို့ပင် အပြုံးလေးနှင့် လိမ်ရသော အရွယ်ရောက်လာပြီး တွံတေးသိန်းတန်သီချင်းလိုလည်း ၄၀ကျော် အချစ်တွေ ဘာတွေဖြင့် ငယ်မူပြန်နိုင်သေး၏။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်ရေး ရသွားပြီ ဖြစ်သည်။အားလုံးသင့်အား ဘာမှ မပြောကြတော့။လွတ်လပ်သွားပြီ ဘေးကင်းသွားပြီ။တောထွက်လို့ ရပြီဖြစ်လေသည်။
ကြားကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်သောဝ် ;D
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: တော်လှန်ရေးကွ
တော်တော် လှန် ရေးပါတယ်
ဖွေးဖွေးကို လိုချင်တယ် ဘာညာ စသသည်ဖြင့်ပေါ့
pooch says: New Year ရောက်တော့မယ်နော် ဟီး
ဖတ်ပြီး တိုင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ စောင့်ရတော့မလားပဲ
လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ တိုက်မှ ရတာလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ၆၂ မှာ အာဏာသိမ်း ပြီး ၈၈ မှာ နောက်တစ်ကျော့ ကွဲ့။
ဒါတောင် ၉၇ ကိုတော့ ရာဇဝင်ထဲ ထားလိုက်တော့ဖို့။
padonmar says: လကဗျာ စိတ်ကူးသိပ်ဆန်းတာပဲ။
အန်တီတို့ဆိုရင်တော့ ဆူးလေ-မင်္ဂလာဒုံပြေးတဲ့ ၅၁ ဘတ်စကားလိုင်းဖြစ်သွားပြီ။
ရွာထဲက တချို့က မြောက်ဥက္ကလာ-ဘုန်းကြီးလမ်းပြေးတဲ့ ၄၃ လိုင်း၊
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . အမယ် မဟုတ်ဘူး။ ၅၁ လိုင်းက လူပိုများတယ်။ ၄၃ လိုင်းက လူနည်းတယ်။ မျှစ်က ၄၃ မရောက်သေးဘူး။ ၄၂ ပဲရှိသေးတယ်။ ၅၁လိုင်းမှာ ၅ဦး ၆ဦးလောက်တော့ ရှိနိုင်တယ်။ ၄၃ လိုင်းမှာ ရှိလှ ၂ယောက်လောက်ပဲ။ ဒါကြောင့် ၄၃က လူပိုချောင်တယ်။ ၅၁က ကျပ်သွားပြီ။
moonpoem says: အာတီဒုံနဲ့ အာတီမျှစ်​တို့ က လိုင်းကားသက်​​တွေ​ပေါ့။ဟိဟိ ရယ်​ရတယ်​။
ဦးကျောက်ခဲ says: မြောက်ဥက္ကလာ-ဘုန်းကြီးလမ်းပြေးတဲ့ ၄၃ လိုင်းကားဆိုပြီး အထင်မသေးပါနဲ့ခင်ည…
လူပိုချောင် မချောင်တော့ မသိဘူး… အလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်ဗျ…
YUYA MON says: SO FUNNY********
kai says: စွန့်ဦးထီတွင်သူတယောက်ဖြစ်သူ က.. လုပ်ထားတဲ့ဝဘ်ဆိုက်အကြောင်း… ဖတ်ပြီး..ထိုင်တွေးနေတာ..
Sugar Daddy, baby တွေအကြောင်း..
မိန်းမက.. အဆင်း.. ကွက်တိအသက်သွင်းပြီး ၀ဘ်ဆိုက်လုပ်ထားတာ..
မိန်းမတွေ နှိမ်ခံထားရတယ်..ဆိုတဲ့အမြင်တောင်း.. ပြောင်းရမလိုလို.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: အသက်၆၆လွတ်လပ်ရေးရသွားပြီဆိုလို့
kyeemite says: .ကျုပ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်နံပါတ်ဗျ….ခိခိ..မိုက်တယ်နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
သုံးသုံး ဆိုတော့ ရီးရား အန်းထက်ကို ကျော်လွန်သွားဘီပေါ့နော်။
Yae Myae Tha Ninn says: Waiting42night… လဲ မရောက်သေး… ထိပ်စီး ချိန်းချင်နေသော အနေအထား… :D
Wow says: နယူးရီးယားကျော်ဘီဆိုတာ ဘူ့မှပြောမပြ၀ူး .. ဟီးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.